Fanolorana fotodrafitrasa tao amin'ny EP1 | Primature
7 août 2021 25 octobre 2021
Mahazoarivo, 07 Aogositra 2021 – Notanterahina androany tao amin’ny foiben’ny Escadron Porté Numéro Un de la Gendarmerie Nationale Malagasy (EP1) – Mahazoarivo ny fanolorana fanavaozana fotodrafitrasa fizarana amin’ny fitifirana (stand de tir réduit ) ho an’ny mpitandro ny filaminana, izay noraisin’ny Praiminisitra Ntsay Christian an-tanana, ka ny tenany no nitarika ny lanonana mifandraika amin’izany ; lanonana izay natrehin’ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena sy ny Sekereteram-panjakàna miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ary manamboninahitra maro, miaramila sy sivily.
Nanomboka tamin’ny taona 1968, ary hatramin’izao vaninandro iainantsika izao, no niantsoana an’ity ivon-toerana ity ho EP1. Eo ambany fitantanan’ny Zandarimariam-pirenena ny EP1 ary miandraikitra ny fiarovana ny Praiminisitra sy ny fianakaviany no antom-pisiany.
Maromaro ny fotodrafitrasa efa natolotra teo aloha, saingy nohon’ny fahitàna fa zava-dehibe ny fanatsaràna ny traikefa ananana amin’ny fitifirana, dia niroso tamin’ny fanavaozana ny toerana ny Praiminisitra. Manaja ny fenitra ara-piarovana ny « stand de tir » natolotra ary misokatra ho an’ny mpitandro ny filaminana rehetra eto Antananarivo izany.
Nambaran’ny Praiminisitra fa tamin-kafaliana no nanolorany an’izao fotodrafitrasa izao ho an’ny Foloalindahy Malagasy sy ny Polisim-pirenena, ary notsiahiviny fa zava-dehibe ny fampianarana sy fizarana.
Nampahafantariny ihany koa fa maro ny olona niara-nisalahy tamin’ny hevitra hanatsaràna tao anatin’ny fanatanterahana ny fanamboarana, ka nankasitrahany manokana izany ary nomarihiny tamin’ny fanolorana taratasy fankasitrahana nandritra ny fotoana androany : « tsy ny tenako irery no nitondra ny anjara biriky tamin’ny fananganana izao toerana izao fa isika rehetra », hoy izy.
← Teny fampidirana nataon’Andriamatoa Praiministra nandritra ny Fihaonan’ny Governemanta sy ny Solombavambahoaka
Faha-58 taonan’ny andron’ny manamboninahitra lefitra
Fitondrana teny fampiononana